Delta musiyano unopararira muHawaii sevane 30,000 vafambi vanosvika zuva nezuva kunhandare dzendege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Delta musiyano unopararira muHawaii sevane 30,000 vafambi vanosvika zuva nezuva kunhandare dzendege
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Dr. Janet Berreman, Kauai Dunhu Hutano Officer
30,000 vashanyi kana kupfuura vari kusvika muHawaii mamwe mazuva, nepo Delta musiyano weiyo COVID-19 hutachiona inova kunetsekana kuHawaii Dhipatimendi Rehutano.
Kutanga muna Chikunguru 8, vakabaiwa majekiseni vanogona kuenda kuHawaii vasina zvirambidzo, kunyangwe nekukurumidza kupararira kweiyo Delta musiyano weiyo COVID-19 hutachiona mu Aloha Nyika.
Dhipatimendi reHawai'i rehutano reHurumende reLaboratories Chikamu (SLD) yaona zviitiko gumi nezvitatu zveSARS-CoV-13 musiyano B.2, inozivikanwawo sekusiyana kweDelta kunetsekana.
Musiyano weDelta wakawanikwa paO'ahu, Maui, Kaua'i, uye Hawai'i Island.
Delta Variant Kupararira muHawaii kunova kunetseka
Kubva nhasi, zvipfumbamwe zviitiko zvekusiyana kweDelta zvakaonekwa paO'ahu, maviri paMaui, imwe paKaua'i, uye imwe pachitsuwa cheHawaii. Iyi nhamba inotarisirwa kupetwa kaviri pamazuva gumi negumi nemana.